Maitiro ekudyara muAmazon Zvakachengeteka | Economy Finance
Maitiro Ekudyara muAmazon Zvakachengeteka
Encarni Arcoya | 29/12/2021 12:15 | Yakagadziridzwa ku 29/12/2021 15:43 | Negocios
Amazon ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa makambani epasirese munyika. Akakwanisa, nebhizinesi rake, kuhwina pamusoro pemamiriyoni evatengi. Unogona kutotenga kazhinji. Chaungasaziva ndechekuti sei kuisa mari muAmazon zvakachengeteka. Nekuti hongu, unogona kuisa mari.
Kana tichitaura nezvekudyara, vanhu vazhinji vanofunga kutenga masheya uye, kunyangwe iri imwe nzira, pane zvimwe zvishoma zvaungade kuziva nezvazvo. Tevere isu hatingokupe iwe sarudzo dzaunofanirwa kuisa mari muAmazon, asi isu tichaisawo patafura zvikonzero nei uchifanira kuzviita.
1 Sei kuisa mari muAmazon
1.1 Nekuti nderimwe remabhizinesi ane ramangwana rakawanda
1.2 Amazon inopfuura chitoro chendaneti
1.3 Amazon inotonga eCommerce sector
1.4 Amazon shares icharamba ichikwira
2 Maitiro Ekudyara muAmazon Zvakachengeteka
2.1 Chengetedza mari yezvikamu
2.2 Tengesa zvigadzirwa zvako
2.3 Dropshipping neAmazon
2.4 Chengetedza mari muAmazon nekubatana
Sei kuisa mari muAmazon
Tinofanira kutanga kubva pahwaro hwekuti, muna 2022, Amazon ichachinja. Zvingave zviri nani kana zvakaipa. Asi kana mutsivi waJeff Bezos ane hunyanzvi semusiki weAmazon, hatina mubvunzo kuti pane bhizinesi renguva. Muchokwadi, haizongogara nekutenga online, asi zvishoma nezvishoma ichapinda mabhizinesi akawanda (ma pharmacy, masupamaketi, nezvimwewo).
saka zvikonzero zvekuisa mari muAmazon kune zvakawanda, asi takaisa mana awo.
Nekuti nderimwe remabhizinesi ane ramangwana rakawanda
Nezvikonzero zvatakambokupa. Ichokwadi kuti pane kusava nechokwadi, sezvakaita mumabhizimisi ose, pamusoro pezvinogona kuitika kana munhu anonyanya kukosha mukambani akasiya basa kana kuenda, asi hazvisi zvose zvinofanira kunge zvakashata.
Kutaura zvazviri, unofanira kudaro rangarira kuti Amazon yakasikwa muna 1994 uye mumakore makumi maviri nemanomwe yakakwanisa kuzvimisa seimwe yemakambani makuru pasi rose., nemamiriyoni emaeuro pazuva.
Zvingori nekuti isu takadyara muAmazon stocks, mune imwe nyaya yemwedzi mishoma kana makore isu tinogona kunge tichirova hombe spike.
Amazon inopfuura chitoro chendaneti
Paunenge uchitenga chimwe chinhu, chii chaunowana mumainjini ekutsvaga munzvimbo dzekutanga? Amazon Chimiro chayo ndechekuti zvinoreva kuti kune mamirioni avanhu vanotanga kuenda kuAmazon kunohodha zvigadzirwa.
Uye hazvina basa kana iwe uchifanira kubhadhara zvishoma (mune dzimwe nguva ndizvo zvazviri) iko kureruka kwekuve nechitoro kwaunogona kuwana zvese zvaita kuti chisisiri chitoro chepamhepo. Sei? Zvakanaka, nekuti ine chikuva chemimhanzi, akatevedzana uye mafirimu, ine mafoto ekuchengetedza ...
Kukupa zano, NASA pachayo yaita chibvumirano chegore computing zvivakwa neAmazon.
Amazon inotonga eCommerce sector
Kwete pakutanga, hongu, asi zvishoma nezvishoma zvakaitwa neanenge misika yose uye inoratidza mukutengesa. Mukuwedzera, tinofanira kuyeuka izvozvo online kutengesa kunoramba kuchiwedzera, Uye vacharamba vachidaro kwemakore mashomanana anotevera kana makumi emakore.
Panyaya yemugove wemusika, muna 2021 Amazon inototora makumi mashanu muzana ekutengesa online muUnited States, uye zvinowanzoitika kuti nhamba iyi icharamba ichikwira.
Amazon shares icharamba ichikwira
Hatizvitauri, asi ndivo vaongorori vezvemari vakasarudza izvi. Pakati pevane makumi mashanu vakapindura (Wall Street analysts), 50 vavo vanokurudzira kutenga Amazon shares nokukurumidza sezvinobvira kuita purofiti. Zvakare, hapana munhu asina tariro nezveAmazon, zvakapesana. Uye izvo hazviitike zvakanyanya paWall Street.
Kazhinji, kana iwe uchitsvaga nzira yekuisa mari muAmazon, iyo chete mukana wainokupa iwe ndeyekutenga masheya. Zvisinei, chaizvoizvo haisi iyo yoga. Unogona here invest kushanda kuAmazon (nokuti iwe unoziva kuti inogona kunge yakagadzikana uye inokupa kuchengeteka), kana nezvimwe zvezvikumbiro zvatinoita pazasi.
Chengetedza mari yezvikamu
Ndekekutanga kuti tichakubata, asi isu tinokurudzira izvi kana iwe uchiziva zvauri kuita. Kuisa mari mumusika wemasheya hakusi kutenga masheya uye ndizvozvo. Iwe unofanirwa kuziva kambani yauri kubheja, kuziva nguva yekutenga uye nguva yekutengesa. Uye, pamusoro pezvose, ramba uchifunga kuti sezvaunogona kuwana mari yakawanda, unogonawo kurasikirwa nemari yakawanda.
Ichokwadi kuti Jeff Bezos akaita hupfumi hwake, pakati pemamwe mabhizinesi, mumusika wemasheya, asi aine musoro.
Ichokwadi kuti zvikamu zveAmazon zvave kudhura, asi zvinofanirwa kuramba zvichikwira, saka zvichiri kubatsira kuzvitenga. Fungidzira kuti dai wakavatenga muna 2010, pavakanga vasina kusimuka zvishoma kubva ku0. Zvino, neanopfuura 2000%, iwe ungadai uri miriyoni. Kana kuda.
Tengesa zvigadzirwa zvako
Imwe nzira yekuisa mari muAmazon ndeye bhizinesi rako. Nekuti, Pamusoro pekuva neCommerce yako, unenge uchisvika kune vakawanda vatengi, dzimwe nguva kunyange kubva kune dzimwe nyika, iyo yekuwedzera nhamba yemirairo yaunayo.
Ehe, iwe unofanirwa kungwarira nekuti Amazon yakanyanya kuomarara uye iwe uchafanirwa kutarisira iyo yese yekutengesa maitiro nekubhadhara makomisheni kuAmazon nekuda kwekungoonekwa muchitoro chavo (izvo dzimwe nguva zvinobhadhara kana uine zvakawanda zvekutengesa).
Chokwadi unoziva izvi, asi pamwe kwete kuti Amazon inopa iyi sevhisi. IAmazon FBA, ndiko kuti, Kuzadzikiswa neAmazon, kana izvo zvakafanana, kuti unotumira zvigadzirwa zvako kuAmazon matura uye izvi zvinoremerwa nezvimwe zvese.
Saka inova iyo inogadzirisa maodha, inoagadzirira uye nekuatakura.
Panzvimbo yekuti Amazon ive mutoro (sezvaive mune yapfuura sarudzo), pano inova iyo asset uye iwe mutoro. Ehe, iyo quota inogona kunge yakakwira, asi kana uine akawanda maodha, inogona kunge iri sarudzo inoshanda.
Chengetedza mari muAmazon nekubatana
Muchokwadi, inzira inoshandiswa nevakawanda niche SEOs kuita mari yavo mablog uye mawebhusaiti. Kunyangwe mapeji emapepanhau anozviita (kana iwe ukatarisa zvinyorwa zvine chekuita neAmazon zvigadzirwa uchaona kuti vanotakura kodhi uye chero kutenga kunoitwa uchishandisa icho chinongedzo kune pundutso yebepanhau, peji, blog ...).
Iwe hauhwine zvakanyanya, asi zvishoma nezvishoma unowana peak yakanaka.
Saka, kana iwe uchida kubheja pabhiza rinokunda, iwe unogona ikozvino kutarisa nemeso akasiyana uye funga nezve nzira yekuisa mari muAmazon zvakachengeteka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Maitiro Ekudyara muAmazon Zvakachengeteka
Chii chinonzi stock indices
Vakanditorera penjeni yangu isiri yangu